Sir Tim O'Theo weRAF. Bruguera Classics adzoka nekuti ... | Zvazvino Zvinyorwa
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Comics, Zvinyorwa
Yese mifananidzo iri muchinyorwa chino inobva kuunganidzwa yangu yeBruguera comics.
... Ndakaverenga nechido mazuva ano izvo iyo nhoroondo ye comics chitupa inodzoka kuvonga kune muparidzi Penguin Ramdon Imba, kubva munaGunyana kuchaburitsa mazita makumi mana neshanu pagore. Ivo vekutanga vakasarudzwa, vanozoona mwenje mutsva muna Gumiguru, ndiwo mafambisirwo e Yakanakisa yeMortadelo uye Filemon (hongu) uye The Akanakisa a Sir Tim O'Theo, pakati pevamwe. Saka isu vedu takakura uye takadzidza kuverenga neaya ma comics mune mhanza. Asi zvakare zvizvarwa zvitsva.
Nhasi ndinogara naye Sir Tim O'Theo, mutikitivha ane mukurumbira wechiNgezi mumasikisi eSpanish, kumwe kwekushaya simba kwangu uye zvechokwadi chimwe chezvinhu zvangu zvekutanga kudzidza mutauro weSaxon uye kuve munonamata wenyaya yematsotsi. Ehezve izvi zvakare ndangariro yemusiki wayo, wechiCatalan wemifananidzo Juan Rafart Roldán, RAF, nechikwata chakamuperekedza.
2.1 The Serie
2.2.3 Mac Latha, mweya
2.2.4 Sajeni Blops
2.2.5 Mumiriri Pitts
2.2.7 Iye burgomaster
2.2.8 Mukadzi Margaret Filstrup
3 Nei uchifanira (re) kutsvaga Sir Tim?
Akazvarirwa mukati Barcelona en 1928 uye munguva pfupi kwazvo akaratidza kufarira kwake kupenda. Zvisinei, yakanga isati yasvika 1956 paakazvipira zvizere kwazviri sa professional. Ini ndaigara ndichisaina sa RAF uye akafa makore makumi maviri nemana apfuura kubva pakurwara kwemoyo. Aive mumwe wevanyori yakawanda yekugadzira uye hunhu mitsara kubva kufekitori yevakuru vemakotoni vakapfuura nepano imba yekutsikisa.
Aive musiki wevanhu vakaita senge Rebrútez, Doña Tecla Bisturín, Sherlock Gomez (muenzaniso kubva kuna Sir Tim), Agapito Silbátez, Doña Paca Cotíllez, Doña Lío Portapartes, Don Pelmazo, Manolón mutyairi werori kana Flash mutori wemifananidzo.. Akanga achishanda muimba yekutsikisa yeChirungu Fleetway uye pamwe kubva mukugara kwake uye ruzivo muLondon akazvarwa iye aive, uye ari, hunhu hwake hwakakurumbira, Sir Tim O'Theo.
Chitarisiko chayo ichiri nyaya yekukahadzika, sezvo vamwe vachiiisa mu magazini nhamba 23 Mortadelo uye zvinoitwa nevamwe mukati Super Thumbelina, pakati pa1971 na1985. Izvo zvakasikwa zvevatambi munhevedzano iyi ndi inonaka uye izere nema nuances, iyo inoratidza rudo rwemunyori kuchisiko chake uye neruzivo rukuru rwaakava naro mumhando yechiSaxon netsika. Pamusoro pe, vanyori vezvinyorwa Iwo aive mazita ehunhu hwe Andreu Martin, Barcelona nhema novel munyori, uye Ron Clark, Munyori wezvekuBritain.
Izvo zvinodikanwa kuratidza izvo zvinyorwa, yakatambudzwa kwete nerevo chete kune yerudzi rwemhando asi ne Anglicisms izvo zvinopa magwaro ne hupfumi hwemitauro uku uchiwedzera kuratidza iyo Parody.
Sir Tim O'Theo inokura kazhinji mu Bellotha Village, kunyange hazvo, nguva nenguva, zviitiko zvavo zvinoitika kune dzimwe nyika senge España. Zvakawanda zvekununura kwake zvaive kubva 2 kusvika ku7 mapeji, asi kune zvekare matanhatu marefu-marefu adventures (Mapeji 42), iyo yakaburitswa kutanga mune akateedzana. Pakati pevamwe pane Kuungana kweMweya o Chirahwe chaSivah.
Mune chaiwo eiyo magazini Mortadelo, uye zvichienderana nemusoro wenyaya, Sirivhu dzaTim Tim O'Theo dzaimukodzera. Sezvazviri mune ino yakatsaurirwa kuma medieval knights.
Ndicho yekare british aristocrat, akanaka asi akangwara mune hunyanzvi hwake semumwe mutikitivha wekutsvaga kupfuura chero chinhu chipi zvacho. Anogara mu Iyo Chimney (Iwo maChim, isu tinogara tichiverenga pane iyo posita), imba huru iri kumucheto kweguta re Bellotha Village.
Patson, Mudiri. Muhudiki hwake akagovana zviitiko mumakoloni naSir Tim O'Theo. Iye anogara achinyunyuta pamusoro pemubhadharo wakaderera waanogamuchira kubva kuna Sir Tim, uyo waanoona seyakaomeswa, asi haazeze kumuperekedza nekumubatsira mune chero nyaya inoda kuongororwa.
Mac Latha, mweya
Ndiye mugari wechitatu weLas Chimeneas uye Sir Tim chete ndivo vanozviona uye kuteerera kumashoko ako. Iye zvakare nyeredzi mune akati wandei ezvekuuya uye kubva kuThe Beyond ine seimwe basa tyisa changamire tim.
Blops ndeye mapurisa emunharaunda, akareba, ane hari-ane bvudzi uye aine masharubu makuru. Zuva rinopfuura asingade kushanda uye kuendesa mapendi edoro kunzvimbo yekudyira yemuno, Iyo Inopenga Shiri. Haakwanise kumira Sir Tim, waanodaidza kuti upstart uye amateur. Uye anowana scalded mune anopfuura kamwe mutambo nekuda kwekusagona kwake.
Ndiyo Blops mubatsiri, akangwara semukuru wake.
Ndiyo muridzi uye mushandi weThe Crazy Bird. Vatambi vanonongedzera kunzvimbo ino seEl ave turuta, El ave chiflada, El ave turulato, nezvimwe. Ndipo panosangana varume vese veguta kuti vanwe doro uye vataure pane zviri kuitika mudhorobha.
Mupfupi, murume anotsamwa uyo ndiye masimba edunhu. Ane hunhu hushoma, anogara naBert, mukadzi wake.
Mukadzi Margaret Filstrup
Chirikadzi yaimbova colonel yeBritish Army.
Musoro weScotland Yard uye mukuru weBlops nePitts, uyo waanowanzo abron nekuda kwekusagona kwake.
Muridzi wechitoro chezvitoro.
El muvambi kubva kuguta.
Nei uchifanira (re) kutsvaga Sir Tim?
Nekuti kana. Nekuti kune avo tatova nezera uko kwaive kusisina mitambo yemavhidhiyo, nharembozha kana chero chinhu chakafanana uye ma comics aive enyambo, ichokwadi mumwe wevanhu vatinofarira. Uye nekuti iyo zvizvarwa zvidiki vanogona kuwana zvakawanda mavara akanaka kwazvo saiye kuti zvinofanirwa kusungirwa kudaro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Comics » Sir Tim O'Theo weRAF. Bruguera Classics adzoka nekuti ...
Francisco Aljama Azor akadaro
Raf aive mumwe wevandinofarira vanyori. Kutonhora.
Pindura kuna Francisco Aljama Azor
Matikitivha gumi ausingazokwanise kumira kuverenga zhizha rino